Bandhigga Shiinaha & Soo-Bandhigga Ganacsiga iyo alaab-qeybiyeyaasha | Donghua
Acrylics waa polymer ee methyl methacrylate (PMMA), oo leh hanti badan oo faa'iido u leh bandhigyada bandhigyada ganacsiga ama bandhigyada iibsiga. Waxay yihiin kuwo cad, qafiif ah, adag & saamayn u adkaysta, la hagaajin karo, si fudud loo been abuurto oo ay fududahay in la nadiifiyo. Fursadaha leh acrylics-ka ayaa ka baxsan bandhigyada bandhigyada ganacsiga. Noocyada loo yaqaan 'Acrylics' waa xulasho caan ah oo loogu talagalay qaybaha kale ee tafaariiqda sida mannequins, bandhigyada daaqadaha, rakibayaasha darbiga lagu rakibay ama khaanadaha, bandhigyada miiska wareega iyo calaamadaha
Xaashida loo yaqaan 'Dhua acrylic sheet' ayaa ka dhigaysa saldhig ku habboon abuurista waababyo iyo bandhigyo ganacsi. Wax kasta oo ka soo baxa miiska iyo miiska illaa boodhadhka iyo calaamadaha lagu soo bandhigo ayaa laga heli karaa xaashigeenna looxa si loogu soo jiito dareenka macaamiisha.
Card Kaarka ganacsiga / buug-yaraha / calaamaddaha heysta
Rames Muuqaallada dhejiska ah